Mushure me Rocket Lake, zvinhu zvishanu Intel inofanirwa kuita pane desktop kuti itorezve yayo CPU mashiripiti
mushure me "Rocket Lake", zvinhu zvishanu Intel inofanirwa kuita pane desktop kuti itorezve yayo CPU mashiripiti
Hatidi kupisa bhizinesi kana rave pasi, saka isu tichasvetuka iyo yekutanga intro iwe waverenga mashoma mashoma gumi nemaviri mumakore mashoma apfuura: AMD neayo Ryzen lineup chiuno chakakomberedza Intel uye yayo Desktop CPU Core
. Uye Intel inoenderera ichizvipfura pachairi mune sneaker, kana iwe uchifunga kuti zvinogona kunge zviri zvekudzokera munhangemutange.
Kambani yazvino processor kuvhurwa, iyo 11th gen "Rocket Lake" Core nhepfenyuro, yanga iri yekushoropodzwa kwechikamu chikuru ( chedu pakati pavo
). Panguva iyo Intel yaida kubvisa chaiyo Empire State Building, girazi rakatyoka uye munhu wese akaona kuburikidza nekunyepedzera.
Saka izvozvi kuti guruva kubva kuRocket Rock kuvhurika rava kugadzikana, uye mutongo wave kusimukira pane yegumi nembiri gen kernel, Intel ingaitei kuti irambe iri mumujaho?ow desktop processor, nekuwedzera kumanikidza kubva kumativi ese? AMD ichiripo uye yakadzika midzi mu7 nanometer tekinoroji neRyzen. Uyezve pane Apple's X factor uye yayo M1 mutsara wevagadziri akawanikwa mumalaptop kusvika parizvino. Intel inofanira kuita, uye munguva pfupi. Hapana chinoitika nekukurumidza, mufunge, muCPU Nyika; mabheti ehunyanzvi anoiswa nevanogadzira machipiti vanobhadhara kana kuwira pamusoro pemakore. Asi heino chirongwa chezviito chenyika yakanaka.
1. Buda mu14nm
Ngatitange nezvinhu zviri pachena: Intel, usagadzirise 11th gen kana kuyedza kushopota kutsvaga tech 14nm. Yegumi Gumi "Comet Lake Refresh" yakaziviswa padhuze neRocket Rock inokwidza zvishoma mune yakaderera-magumo 10th Gen Pentium neCore i3 machipisi, akagadzirirwa kusimbisa Intel's bhajeti processor lineup. Iko hakuna matsva maprosesakuguma kwakadzika mudombo redombo mufmily.
Kuona maitiro Comet Lake Refresh kuri kuyedza kuenderana nezviri nharo chikamu chikuru cheiyo desktop processor musika (yepakati-renji uye yepasi-magumo ma processor), ngatitarisire kuti kambani haisi ini usinga tarise ku "zorodza" mamodheru senge iyo Core i5-11600K apo kambani yegumi nembiri chizvarwa 10nm processor dzakateedzana "Alder Lake" inosunungurwa imwe nguva gare gare gore rino.
Kwave nemakore manomwe Intel yakatanga kuburitsa maprosesa zvichienderana ne14nm lithography, uye inguva yekufamba on, zvese kubva kune tekinoroji, kushambadzira uye mainjiniya maonero. Kuvhurwa kwe
inoratidza kuti mainjiniya eIntel vakatora maitiro nezvese zvavaigona kuenda, kunyangwe neiyo 10nm "Ice Lake" cores iyo yakadzoserwa ku14nm maitiro. Iko kudiwa kwekuitaKuchinjisa iyo 10th Gen mutsara wekupaka 10-core chip kusvika kune sere chete zvino chiratidzo chekuti miganho yasvika. Neraki, zvinoita kunge Intel yakazvipira zvizere kugwara rayo rekuburitsa ma processor ese emangwana pane yayo nyowani 10nm dhizaini. Nyowani CEO Pat Gelsinger kunyangwe munguva pfupi yadarika akapa muongororwo we
$ 20 bhiriyoni zvirongwa zvekuvaka nyowani 7nm
mafekitori pakambani yeArizona campus.
Intel yaizovaka machipisi panguva kune yayo mashandiro uye kune vamwe vatengi, ichive chikamu cheinodaidza yayo "Intel Foundry Services" network yezvigadzirwa zvekugadzira uye zvinogona kudyidzana nemafekitori ekunze senge Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Icho chirongwa chinogona, kana chiine pundutso zvakakwana, kupa Intel hwaro hwainoda kuzvimisazve pachayo.isa pamugwagwa unoratidza kukwikwidza kumisidzana ne AMD mune zvigadzirwa zve desktop, munzvimbo dzakaita se lithography, dhizaini, tekinoroji, kugadzira uye maitiro. .
Intel yakaratidza, kunyangwe neyakajairwa kumisikidzwa kweRocket Rock, kuti zvakanaka pakuita iyo imwechete- kuverenga kwakapetwa. Kunyangwe iine 14nm tech chikwereti chakasungirirwa pamapiki ayo, Intel haina kana dambudziko rekuwana yepamusoro furemu mitengo mumitambo pamwe nekambani yepakati-renji uye yepamusoro-yekupedzisira zvipiriso mumakore mashoma apfuura., Ma processor aya ari kusangana ne discrete system.
Ryz fr 9 5900X ) ichirova Intel Core i9-11900K processor mumitambo yakati wandei yakakurumbira. Iyo feat ndiyo inofanirwa kuve yakaoma nenhamba yemacores akawedzerwa.
AMD yagadziridza zvivakwa zveZen mumupendero wakatsetseka, uyo unogona kurova chero nzvimbo nyoro kubva kuIntel, apsezviri pachena pakukumbira. Iyo
, yeavo ma processor pakati peiyo 11th Gen Rocket Lake lineup yatakatarisa kusvika parizvino, ndiyo Intel yakanaka kwazvo yekuchengetedza kukosha mukutaurirana kwemitambo izvozvi, tisingataure chinzvimbo chehutungamiriri. Intel Alder Lake ichafanirwa kuita zvese zvainogona kuti inyatso dzoreredza iyo inotungamira AMD yakatyisidzira mumitambo yedesktop. Uye kusvikira taziva zvakawanda nezve 12th Gen Intel kana AMD Zen 4, hatigone kutaura chokwadi kuti hondo iyi ichatanga sei. Mhinduro yaIntel inotarisirwa gare gare gore rino; hatina chokwadi nezve ma AMD.
Parizvino, zvakadaro, zviri pachena: AMD's Ryzen 5000 ikozvino yakaenzana kana sarudzo iri nani kune vatambi vane bhajeti, kupisa, kana simba-vanoziva. Uye, iwe unoziva, yakakwira furemu mitengo zvakare!
3. Ndokumbira unamatire kune soketi imwe kwenguvanguva
Nzvimbo huru iyo kukosha kwesarudzo kwe AMD desktop processor kana marongero eIntel isinganyatso kuoneka ndiyo inozivikanwa se "mutengo wekutora". , inogona kuve chero chinhu kubva pakuda kukwidziridza yako PC simba rekushandisa kuti igone iyo ine simba-ine simba processor, kutenga new mamaboardboard kuti ienderane neyakagadziridzwa chipset uye nyowani processor socket.
AMD yanga ichiburitsa mapurosesa matsva eRyzen pasi peyake Zen yekuvakwa nguva nenguva kweanopfuura makore mana ikozvino. Uye iwe unogona kuwana yazvino chizvarwa processors senge iyo Ryzen 9 5900X, yakaburitswa muna 2020, iyo inogona, nekodhi kodhi modhi uye kurudyi BIOS yekuvandudza, zvinehunyanzvi kushanda mubhodhi reB350 rakaburitswa muna 2017.
Zvino hapana vimbiso. Mamiriro acho ari akaomesesa zvishoma
pakati peakasiyana mamaboardboard vagadziri
uye muzvinoenderana neiyo chaiyo Ryzen processor yaunoda kushandisa. Asi zvakazara, AMD's Socket AM4 inopa danho rekudzokera kumashure kuenderana kwechipsets uye zvigadziko izvo Intel isingangotambure kuenzanisa, asi kazhinji inoita kunge iri kushingairira kuronga kupokana. Makumi maviri ezvigadziko zvigadziko cadence hachisi chinhu chitsva cheIntel, mufunge. Mumakore mana mamwe chete ayo AMD yakaburitsa AM4-inoenderana desktop processor, Intel yakapfuura nepakati pemasokisi maviri, iine rimwezve socket (LGA 1700)
Alder Lake yakarongerwa kuburitswa gare gare gore rino.
. Maitiro eIntel akagadzira iyo pfungwa yechinowoneka mamaboard papuratifomu zvisingaite, nepo AMD iri kuita zvese musimba rayo kuunza vatengi vazhinji vekare nevatsva munyika sezvinobvira.
AMD yakaratidza kuti kunyangwe ichangoburwa yepamusorosoro processors anogona kutsigirwa kwekanguva pa cVakuru mama mitsara, kana paine hunyanzvi hwekuda uye chibvumirano pakati pevamwe vekadhi. Saka kana Intel iri kuramba ichikwikwidza maererano nemutengo wekutora, inoda kutsvaga nzira yekutyora socket yekutamba mumatanho maviri ... uye nekukurumidza.
4. Gadzira mapikicha akabatanidzwa kune AMD zviyero
Sezvatambotaura pamusoro, yepakati-kusvika-pasi-kumagumo desktop processor musika inomiririra mugove weshumba we desktop chip chip sales . Uye sandwiched kune akawanda mapurosesa ane yakasanganiswa giraidhi. Kusvika nguva pfupi yadarika, yaitongwa neIntel processors neyakaunganidzwa yesilicon UHD Graphics poky uye utility (kazhinji iyo UHD 630 kana 600). Isu tinovadaidza kuti yakasanganiswa grafiki processor (IGPs). Vazhinji vatengi vebhajeti vashoma vanovadaidza kuti kumba.
Idzi mhando dze processor dzinonyanya kufarirwa mumusika weOEM / system muvaki weyakaderera-bhajeti maPC nekuti ivo vanoita kuti zvive nyore kutora yakaderera-inoshanda desktop PC (yebasa rehofisi, kazhinji) kubva pasi. Uye yakanaka IGP iri, kamwe kamwe, kunyanya kukosha pano muna 2021 nemitengo inokwira yemakadhi emifananidzo. Nekudaro, maPC emitambo mazhinji aripowo pamabhajeti akaomarara, uye dzimwe nguva Intel processor ine UHD Graphics IGP kana chip ye AMD ine mumwe wayo weRadeon inoita mutsauko pakati pekuve nePC yedesktop yaunogona kutamba kana kushaya kana chinhu. Ngatidzokerei kune imwe girafu, kubva kune yedu Rocket Lake chip kuvhura bvunzo, pano yeiyo IGP muCore i5-11600K. Kune ino chikamu chemusika, iyo nyeredzi
inotonga yepamusoro yekutenda kune yayo yakasanganiswa Radeon RX Vega 11 IGP ...
Sezvauri kuona mumatebhu egirafu pazasi Pamusoro, Intel zvave pachena kuita nhanho huru mukuvandudza chip yayo. graphic architecture. Iyo Rocket Lake renji ndiyo yekutanga pane iyodesktop yekubatanidza itsva Intel's Iris Xe mifananidzo. Icho chiri muchimiro cheiyo nyowani UHD mifananidzo iteration, iyo UHD 750, kazhinji kazhinji. (Iris Xe akatanga kuratidza mu11th chizvarwa "Tiger Lake" mafoni mapurosesa emalaptop, uye chaive chizaruro ipapo.) Zvakawanda zvibodzwa uye furemu reti mhedzisiro yakanyorwa panguva yedu Intel Cor IGP i5-11600K bvunzo (ine chip yakashongedzerwa neiyo nyowani Iris Xe UHD Graphics 750 IGP) zvakapetwa izvo zvechizvarwa chakapfuura. Ichi chiitiko chakakura cheIntel, sezvo mazhinji eiyo AMD's Ryzen mutsara machipisi asina IGP uye anoda kuti vhidhiyo kadhi riite. (Uye, isu takataura here, makadhi evhidhiyo anodhura mazuva ano?) Iyi IGP yekuwedzera yekuwedzera mavambo akanaka, asi ichiri kuchena kana ichienzaniswa neiyo Ryzen IGP ye AMD mu
, yakatangwa ... back muna 2019. AMD ine mamwe eaya IGP akashongedzerwa machipsi mu sisu chikwama. (Ivo vanonzi iyo G-Series, imwe iri iyo
.) Ivo vanopa kukosha kukuru kune vatengi vemari vari kutsvaga kutamba mitambo pane IGP, uye ivo vachiri zvakaoma kuwana izvozvi mitengo padyo nemazita emitengo ($ 149 uye $ 99 panguva yekuburitswa), ivo havasi-brainer kune vasingadhure vatambi. Pamusoro pezvo, isu tinotarisira kuzadziswa kweRenzen 5000 yeaya maG chips muna2021. Uye pavanogogodza, tarisa Iris Xe.
5. Usaburitse imwe Core i9-11900K
Isu tinotenda iyo Rocket Lake Core i9 mureza inogona kuona kuchinjika kwemutengo kwenguva refu. Inopisa uye inodhura zvakanyanya kuti chii. Uyezve, zvaive zvakaoma kuongorora. Vazhinji vanoongorora pawebhu, kusanganisira ini, vakawana kuvhurwa uku kwakaoma. Kutaura chokwadi, AMD haina mutorwa kuBIOS kana pre-kuburitsa nyaya dzekutyaira (te zvese zviri mukati mayo
) mapurosesa, asi izvo vazhinji bhenji testers vaifanira kubata nenguva ino kutenderedza vakatichengeta takamirira ... Alder Lake.
Mutongo wedu wekupedzisira paIntel Iyo kambani ichangoburwa mureza wedesktop processor saka yakadzikiswa nenyaya shoma dzekuyedza. Asi nezuva kana maviri akatevera kuburitswa, kubvumirana kwenyaya-o-sphere kuri: Iyi haisi Intel's yakanakisa silicon awa.
Zvinoshamisa kubva kudesktop processor inogadzira iyo isu tinowanzo kudada nekugadzikana. Pamusoro pezvo, kambani yakatengesa iyo Core i9-11900K, musere-musimboti processor, pamusoro pechiteshi chayo, uye pamukana wese wekudzikisira AMD, yaenda nedivi rakapesana ndokuwedzeredza CPU. iine maviri mashoma cores pane ayo akaitangira kune akakwirira mutengo. Isu tinoziva kuti yesilicon kugadzirwa ndiyo bhodhoro ree mazuvano nemitengo yakakwira, asi iyo yakakosha kudzora inflation uye mitengo mune imwe chip? Enda!
Intel yanga iri mumachinjiko kwemakore akati wandei pamusoro pekunetseka kwekurasikirwa nenzvimbo yayo yehutungamiriri muPC desktop, ne AMD ichipfuura iyo kambani pamatafura kusvika pamitengo yakawanda yemitengo. Iyo Core i9-11900K inongosimbisa iyo pfungwa mupfungwa dzevatambi uye vanogadzira zvemukati izvo Intel iri panjodzi kukunda nakare kose kurwisa kwe AMD.
Kambani inotevera yekushanya mune desktop desktop processors
ichave iri pa10nm
, iyo yatove inoisa kumashure kwe AMD pane lithography pamberi pegumi nembiri kernel isati yasimuka. Izvo Intel zvingangoda kuita kuziva iyi chinzvimbo, ichienderana nemusika, uye kudzikisa mitengo yayo nenzira. Kana iyo kambani ichiziva kuti Alder Lake haizokwanise kuenzanisa naAMD yakabikira Zen 4, kutamba mutambo wemitambo kwenguva ingangove nzira yekuenda. Zvimwe zvikamu zveIntel zvichiri gangbusters, mushure mezvose.
Runyerekupe rwekutanga runoratidza kuti Zen 4 ichave yakavakirwa paTSMC's 5nm lithography uye yayo yekutanga muvara kutanga kwa2022, ichipa Alder Lake hwindo rakatetepa reIntel yekusimbisa nzvimbo yayo yekurwira muna 2021 nekupfuura.
Intel ine mugwagwa wakareba (kadhi) kumberi
Kana Intel ikasaita izvi Ino nguva, isingakoshese zvakanaka chipbank yayo, zvinogona kukonzeresa kunyange kunonoka kukuru kwekambani zvichienzaniswa nezvazviri ikozvino neiyi yazvino kuvhurwa.
Zvino ndezvechokwadi kuti hurukuro yekuvhurwa kwekambani ichangoburwa neInternet yayo itsva zvaishamisa kutaura. iyo kambani inobvuma pachena kuti yaive kumashure kwechirongwa, ichinyatso kuburitsa mugwagwa wayo. yenziraunodzoka. Asi, kana chero kambani iri mwana wechirevo "nzira dzemigwagwa dzinofanirwa kuputswa," mumakore achangopfuura, Intel. Kufambira mberi kwaIntel pakuvaka matsva matsva here kana (kunyangwe simende yese isati yaoma pavari) switch ku10nm inokwana kudzosera AMD munzvimbo yayo yepamberi? -Zen? Inguva chete ndiyo ichaudza. Maonero edu ndeekuti Rocket Lake yaive yekuzadza vhezheni, ichichengetedza nguva yedanho rinotevera. Ino nguva muna 2022, isu tinofanirwa kuziva kana kwaive kufambira mberi kune hasha pane chessboard, kana kungo fambisa kwekufamba kweshongwe.
Amd ryzen 9 3900x vs Intel Core i9-9900k: ndeipi yepamusoro-yekupedzisira processor yekutenga?
2021-04-18 22:26:17 | Ma processor
Nekusvika kwekutanga kweRenzen 9 processor mu2019, AMD yakawedzera kugona kwayo kukwikwidzana nekuita kweIntel iri kukwikwidza Core i7 uye Core i9 machipisi. Kana iwe uchitsvaga iyo yepamusoro-kuita, mainstream desktop processor, iyo Ryzen 9 uye Core i9 zvese zviri zviviri zvinomanikidza sarudzo. Mu...
Chii? amd's ryzen 5600x ikozvino inodhura $ 369?
2021-04-18 15:38:12 | Ma processor
(Chikwereti: Micro Center) Nechimwe chikonzero, mutengesi wemagetsi Micro Center anoda kuti iwe ubhadhare zvimwe kuti uve neyako yeiyo Ryzen 5600X processor. Vavaki vePC vakaona neChipiri kuti Micro Center yakanga ichitengesa processor inozivikanwa ye $ 369, kuwedzera kukuru kubva kune yakashambadzi...
Isu tiri kuyedza kukanganisa basa reChina pane exascale supercomputer nekuvharira kunze kwenyika
2021-04-11 08:17:32 | Ma processor
(Mufananidzo naYang Bo / China News Service kuburikidza neGetty Mifananidzo) Hurumende yeUS iri kusimudza nzira dzekudzivirira China kubva pakuvaka komputa yayo ye "exascale". Nemusi weChina, Dhipatimendi reUnited Commerce rakatemesa kudzora kwekutengesa kunze kwenzvimbo ina dzinodhura muChina dzaka...
Intel Core i5-11600k processor kuongorora
2021-04-03 06:57:30 | Ma processor
Iyo nhanhatu-musimboti / 12-shinda Core i5-11600K ($ 262) inounza kumwe kugadzikana kune kuvhurwa kweIntel ichangoburwa chizvarwa che11th ("Rocket Lake") mutsetse we desktop desktop. Chiratidzo chekutanga cheRocket Rock kuvhura swing chaive chisati chaitika kutengesa mutengesi uye kwakazotevera kuye...
Intel Core i9-11900k processor ongorora
2021-04-03 06:54:25 | Ma processor
Ndiyo itsva $ 539 Intel Core i9-11900K desktop processor yakagadzirwa nesilicon? Ehe, zvirokwazvo ndizvozvo. Izvi zvinoreva here kuti, nekuwedzera pano mu2021, zvingave zvakaoma kuwana pamutengo weIntel wakakurudzirwa? Zvinogoneka. Iko kudiwa kwemhando yepamusoro-yekupedzisira chinhu chakanyatso kub...
Intel: Rocket Lake mapurosesa akabatidzwa girini pamberi pemakwikwi neamd yakawedzera zvakanyanya
2021-04-02 01:41:11 | Ma processor
(Chikwereti: Intel) Kana iwe uchinetseka kuti nei Intel isiri-inoshamisira Rocket Lake mapurosesa achitovapo, ziva kuti kambani yakavhura mapurosesa makore maviri apfuura apo chipmaker akatarisana nemakwikwi mashoma kubva kumukwikwidzi AMD. MuReddit Ndibvunze Chero Chinhu. , Intel yakaratidza kuti y...
ARM inopa Arvv9 yayo yekuvaka uye nzira yemugwagwa
2021-03-31 14:44:20 | Ma processor
Kubva pamapasipoti ekudzivirira kuenda kumadhijitari ekurapa edhijitari, madroni ekushambadzira masystem uye matekinoroji ekudzoka zvakachengeteka kunzvimbo yebasa: Simon Segars, CEO weARM, akapa zviitiko zvinoverengeka zvekushandisa kwekambani yekutanga IT yekuvaka mumakore gumi, iyo Armv9. Pane ch...
Intel Rocket Lake processor mitengo inogona kunge yakaburitsa: yakakosha i9-11900k yakanyorwa pa $ 599
2021-03-29 04:55:57 | Ma processor
(Kiredhiti: Intel) Mutengesi wePC muMilwaukee, Wisconsin anogona kunge akazivisa mitengo yevagadziri ve11th Gen Intel Core "Rocket Lake" pamberi pekutanga kwemwedzi unouya. Mutengesi, Milwaukee PC, anoita kunge akaisa netsaona mapurosesa edesktop ari kuuya pairi webhusaiti, iyo yakaonekwa nemushandi...
Nzira yekusarudza laptop processor muna 2021
2021-03-25 19:43:11 | Ma processor
Pamwoyo palaptop yega yega chinhu chepakati pekugadzirisa unit (CPU) inoona nezve zvese zvinoitika mukati. Iwo ma processor (anonziwo "ma processor") aunoona mumalaptop anogadzirwa ne AMD, Apple, Intel, uye Qualcomm. Sarudzo dzinogona kuita sedzisingaperi, uye mazita avo, Byzantine. Asi kusarudza im...
Intel's 7nm PC chip ichauya muna 2023 ichishandisa tsmc tekinoroji
2021-03-25 04:48:22 | Ma processor
(Chikwereti: Intel) Intel yekutanga 7-nanometer PC komputa chip iri kuuya muna 2023, uye painodaro, processor haizove yakasikwa yeIntel chete. Panzvimbo iyoyo, iyo kambani inoti ichatorawo kugadzira kubva kuTSMC, iyo inovaka kumashure kweanokwikwidza AMD, kugadzira zvimwe zvikamu zvechip. Piri neChi...
Intel yekuvaka machipisi kune mamwe makambani ane new foundry bhizinesi
2021-03-24 00:56:53 | Ma processor
(Chikwereti: Intel) Intel iri kuita nyowani nyowani muindasitiri yekutangisa, iyo inosanganisira yekugadzira tsika dzemakomputa machipisi emakambani eetekinoroji nehurumende dzekuMadokero. Nhau idzi dzinoreva kuti Intel inogona kupedzisira yavaka maARM machipisi eQualcomm neApple, ichifunga kuti ino...
Intel 'Alder Lake' processor yekutsigira pcie 5.0, ddr5 ram
2021-03-23 02:17:10 | Ma processor
(Chikwereti: Intel) Intel's "Rocket Lake" desktop processor ichavhura zviri pamutemo svondo rinouya. Asi parizvino, ruzivo rwekambani inotevera chip chip, "Alder Lake, " sezviri pachena yaburitswa. VhidhiyoCardz yakawana masiraidhi epamutemo eIntel mharidzo paAlder Lake, iyo inosanganisira ese mavir...
Intel Rocket Lake processor mitengo inogona kunge yakaburitsa: yakakosha i9-11900k yakanyorwa $ 599
2021-03-20 00:50:07 | Ma processor
(Chikwereti: Intel) Mutengesi wePC muMilwaukee, Wisconsin anogona kunge akazivisa mitengo yevagadziri ve11th Gen Intel Core "Rocket Lake" pamberi pekutanga kwemwedzi unouya. Mutengesi, Milwaukee PC, anoita kunge akaisa netsaona mapurosesa edesktop ari kuuya webhusaiti, iyo yakaonekwa nemushandisi we...
Haisisiri mac: justin maapuro madhirezi e windows pc mune zvitsva zviziviso
2021-03-18 01:20:55 | Ma processor
(Kiredhiti: Intel) Justin Long, mutambi anoonekwa mumashambadziro eApple 'Get a Mac', anoshandura mativi uye anobatana neIntel mukusimudzira Windows PCs. NeChitatu, Intel yakaburitsa shanu vhidhiyo kushambadzira ine Yakareba kusimudzira mabhenefiti eWindows PCs ichitora akawanda kurova Apple's Mac e...
Vatengesi Vanosimudza Pre-Order Mitengo yeIntel's Rocket Lake Ma processor
2021-03-17 04:40:35 | Ma processor
(Chikwereti: Intel) Pre-maodha epamberi maIntel "Rocket Lake" mapurosesa anotanga nhasi, uye kana iwe uri kuronga nezvekutenga, gadzirira kune mamwe mawere mitengo. Vatengesi vakuru vari kuchaja $ 75 kusvika $ 119 kupfuura mutengo weIntel. yakatsanangurwa yakadzama yea processor, izvo zvinoita kuti ...